Nitondra avo ny voninahim-pirenena, nampiray ny malagasy, ary namela tantara eo amin’ny sehatry ny baolina kitra, sy ny tantaram-pirenena ny BAREA. Niaina ny tsy nampoizina ny BAREA sy ny Malagasy tsy vaky volo. Na tsy nitondra ny amboara nody aza ny BAREA, nandresy ny ekipa tamin’ny fahazoana ny fon’ny Malagasy rehetra manerana izao tontolo izao. Sambany tokoa tao anatin’ny 59 taona nahazoana ny fahaleovan-tena no niara nitepo, sy nitondra ny tanindrazana am-po sy an-tsaina toa ireny ny Malagasy. Nirehareha fatratra fa Malagasy ny rehetra. Tsapan’ny filoham-pirenena Andry RAJOELINA ny fitiavan’ny Malagasy baolina kitra, fanatanjahan-tena ary ny fitiavan-tanindrazana.
Hitohy hatrany ny dian’ny barean’I Madagasikara. Hiakatra ihany koa ny lentan’ny fifaninana ho hatrehiny, ary hanaraka akaiky ny Malagasy. Noho izany, ho karakaraina ny kianjan’ny Mahamasina. Ho atao mazaka mpijery hatramin’ny 60.000 ary ho atao manara-penitra ny kianja.
Porofo velona ireny lalana nodiavin’ny BAREA nandritra ny fiadiana ny amboaran’ny Afrika ireny fa rehefa manam-pinoana sy fanantenana ary miaraka ny Malagasy dia tsy misy mahasakana ary mahavita manova zavatra. Itam-poko, itam-pirenena ihany koa ankehitriny fa firenena handroso hatrany i Madagasikara. Ary manomboka eto ho ré manerana izao tontolo izao i gasikara hoy ny filoham-pirenena Andry RAJOELINA.